Darpan Nepal – बास्तबिक अध्ययनले यसो भन्छ, एक रातमा कति पटक सम्म सेक्स गर्न हुन्छ ? जन्नुहोस
बास्तबिक अध्ययनले यसो भन्छ, एक रातमा कति पटक सम्म सेक्स गर्न हुन्छ ? जन्नुहोस
स्तनको स्पर्शले महिलाहरुमा यौन आनन्द प्राप्त हुन्छ । अर्थात् महिलाहरुको यौन उत्तेजनामा योनी जति संवेदनशील हुन्छ स्तनको टुप्पो पनि त्यस भन्दा कम हुँदैन । हुनत यो यथार्थ जान्ने र भोग्नेहरुले थाहा पाएकै कुरा हो । तर किन यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा भने हालै मात्र वैज्ञानिकहरुले पत्ता लगाएका छन् । अमेरिकाको रट्जर्स विश्वविद्यालयका अनुसन्धान कर्ताहरुले गरको अध्ययनले महिलाहरुको स्तनको टुप्पो र योनीमा हुने समान यौन संवेदनशीलताको कारण यी दुइ अंगबाट प्रसार हुने संवेदना मस्तिष्कको एउटै भागले ग्रहण गर्नु हो।
Previous Post‘ओरेन्ज सिटी’ बन्दै पुर्बी पहाडी जिल्ला धनकुटा (११ तस्विरहरू ) Next Postयस्ता छन् गाजर खानुका फाइदाहरु (भिडियो सहित)